जान्हवीको करियर खतरामा, एक्कासी किन गरिन् बलिउड छोड्ने निर्णय ? – Jagaran Nepal
जान्हवीको करियर खतरामा, एक्कासी किन गरिन् बलिउड छोड्ने निर्णय ?
बलिउडकी अत्याधिक रुचाइएकी नायिका स्व. श्रीदेवी र फिल्म निर्माता बोनी कपुरकी छोरी हुन् जान्हवी कपुर। जान्हवीले सन् २०१८ मा धर्मा प्रोडक्सनको फिल्म `धडक´बाट बलिउडमा ग्र्याण्ड डेब्यु गरेकी थिइन्। फिल्म व्यवसायिक रूपमा सफल नै रह्यो। जान्हवीको काम, मेहनत र प्रतिभाको तारिफ पनि भयो।
`धडक´पछि जान्हवीले अन्य केही फिल्ममा पनि काम गरिन्। तर ती फिल्महरू सोचेजति सफल हुन सकेनन्। उनका फिल्महरू थिएटरभन्दा बेसि नेटफिलिक्सतिर प्रदर्शन हुन थाले। जान्हवीले जुन सपना देखेर बलिउडमा पाइला राखेकी थिइन्, त्यो सपना उनलाई छाडेर परपर भाग्न थाल्यो। उनले ठूलो ब्यानरमा काम पाइनन्।
करिब डेढ महिना पहिले उदयमान बलिउड अभिनेता सुशान्त सिंह राजपुतले आत्महत्या गरेपछि दर्शकहरूले बलिउडका स्टार किडलाई बहिष्कार गर्न थाले। विशेषगरी करन जोहरले बलिउडमा ल्याएका स्टार किडहरूको त फ्यानहरूले खेदो नै खन्न थाले।फ्यानहरूले करन जोहरको रिस स्टार किडहरूमाथि पोख्दै विभिन्न ट्रोल बनाएर उडाउन थाले। यसमा जान्हवी पनि परिन्। किनकी उनी स्टारकी छोरी हुन्।
अहिले बलिउडमा चलेको स्टार किड बहिष्कार अभियानलाई मध्यनजर गर्दै जान्हवीले बलिउड छाड्ने निर्णय गरेकी छन्। भोलि आफ्नो करियर डुब्ने देखेर जान्हवी बलिउड छाडेर टलिउडमा जान थालेकी हुन्। यसभन्दा पहिले पनि साउथ फिल्मबाट उनलाई कैयौं अफर आएका थिए। तर बलिउडमै केही गर्ने सोचेर जान्हवी त्यता गएकी थिइनन्।
रिपोर्टका अनुसार, जान्हवीले साउथ फिल्मको ठूलो ब्यानरमा काम पाएकी छन् र सो फिल्म साइन पनि गरिसकेकी छन्। बलिउड छाड्ने जान्हवीको निर्णयलाई फ्यानहरूले सकारात्मक रूपमा लिएका छन्।